I-Social Media Do's kanye nokungafanele uyenze | Martech Zone
I-Social Media Do's kanye Nalokho Okungafanele Ukwenze
NgoMgqibelo, ngoMashi 14, 2015 NgoMgqibelo, ngoMashi 14, 2015 Douglas Karr
Ngobunye ubusuku bengikhuluma nomunye umthengisi futhi besidingida ezokuxhumana, imicimbi nemiphumela. Ubengitshela ukuthi ubengayiboni kanjani nje imiphumela evela ezinkundleni zokuxhumana ukuze ayenze izuze. Uma ngikhuluma iqiniso, angisho ukuthi angivumelani nhlobo. Ngenkathi iphrofayili yami yobungcweti nokufinyelela kwebhizinisi kuqhubeka nokukhula, abantu bangahle babone ukuthi ukulandela kwami ​​uqobo ezinkundleni zokuxhumana kumile isikhathi eside.
Ngokwethembeka konke, isikhathi sami esiningi esichithwa ezinkundleni zokuxhumana sisezingxoxweni eziyimfihlo ngaphandle kwenethiwekhi yami yobungcweti. Ngibamba iqhaza nsuku zonke ezingxoxweni zobungcweti, kepha leyo yingxenyana yokusetshenziswa kwami.
Ngabe lokho kusho ukuthi ayifanele? Cha, akunjalo. Angenzi imali ngenkuthalo ngezithameli zami zokuxhumana ngakho akuyona into engilahlekelwa yiyo imali. Futhi, ngokuthembeka impela, angifuni ukuhlala ngithengisa ezinkundleni zokuxhumana. Ngabe ngishiya imali etafuleni? Mhlawumbe - kepha inani elikhulu lemithombo yezokuxhumana lilonke uma liqhathaniswa nezithameli ezihlosiwe ezingenza ibhizinisi nami zilale ngokweqile.
Okuhlinzekwa yilokhu okulandelayo ukufinyelela engikudingayo ukuze ngisebenzise amathuba wokubhala nokukhuluma. Abantu babona izinombolo ezinkulu, ngakho-ke bangivulela umnyango wabo. Lapho nginawo lawo mathuba, aletha imali eqondile. Ngakho-ke - ekuhambeni kwesikhathi ngiyazuza ngokusetshenziswa kwami ​​kwemithombo yezokuxhumana? Ngicabanga kanjalo!
Ngizoyeka ukumaketha ngenkuthalo nokusebenzisa imithombo yezokuxhumana? Lutho neze - kuseseyisiteshi lapho izilaleli zami zikhona, umphakathi owengeza inani emsebenzini wami, nalapho abantu bacwaninga ngezinqumo zokuthenga. Akunjalo ngokushesha or inzuzo njengezinye iziteshi kimi. Ngithola ukuthi ngikhulise umthelela wokuxhumana nabantu lapho ngikuhlanganise ekumaketheni komzila wesiteshi nakumaphromoshini ngaphezu kokuwusebenzisa njengesiteshi silo'd, ngakho-ke yindlela esiphatha ngayo futhi sisebenzisa isu lethu lezokuxhumana.
Amanethiwekhi omphakathi ayizindawo ezinhle zokuqhakambisa umsebenzi wakho nebhizinisi - ikakhulukazi labo abathengi abasesha iziteshi besebenzisa amabinzana abalulekile, amagama nama-hashtag - kepha akuyona indawo yokuthengisa kanzima ngakho-ke kubalulekile ukuba nokuxhumana kwangempela. Kufanele uthuthukise ukwethemba nokuqonda ngamakhasimende angaba khona.
Abantu base-Insurance Octopus benze umsebenzi omuhle lapha wokuhlanganisa ndawonye imikhuba emihle yezokuxhumana kule infographic ekuhleleni, ukusetshenziswa, ama-hashtag, izethameli nokusetshenziswa kokuqukethwe. Kuyiseluleko esihle!
Tags: izeluleko zokuxhumana nabantuezokuxhumana imikhuba emihle kakhuluimithombo yezokuxhumana yenza nokungafanele ukwenze
Hlala Ubuka Umncintiswano Wakho We-inthanethi noRivalfox
Mar 16, 2015 ku-10: 07 PM
UDoug, ufundisa kakhulu okuthunyelwe okuwusizo kakhulu.